Predestination (2014) – ကြည့်မိသမျှ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » Predestination (2014) – ကြည့်မိသမျှ
Predestination (2014) – ကြည့်မိသမျှ
Posted by ဇီဇီ on Mar 21, 2015 in Arts & Humanities, Celebrity, Creative Writing, Entertainment, Movies/TV, Society & Lifestyle | 34 comments
ကြည့်မိသမျှ ရွှီးဖို့ ခြေလှမ်း စတင်ပါပြီ။
ရွာမှာရှိသော “ရုပ်ရှင်ကျွမ်းကျင်” ကိုယ်တော်ကြီး ကိုယ်တော်လေးတို့…
ပြုံး၍လည်း ရွှီးတာကို နားထောင်တော်မူပါ။
ရီ၍လည်း ရွှီးတာကို ဖတ်ပေးတော်မူပါ။
“Predestination”ကို Movie Link (http://www.channelmyanmar.com) မှာ မြင်ပေမဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသားကိုမကြိုက်တာကြောင့် ကျော်ပြီး တခြားကား ရွေးရွေးကြည့်ရာကနေ မိတ်ဆွေ ကိုဖျာက သူ့စတေးတပ်မှာကောင်းတယ်လို့ ညွှန်းလို့ ဒီ နေ့ ကြည့်မိလိုက်တယ်။
84% – RottenTomatoes
3.5/4 – RogerEbert
69% – Metacritic
Initialrelease: June 13, 2014 (Vietnam)
Directors:Peter Spierig, Michael Spierig
Runningtime: 97 minutes
InitialDVD release: November 26, 2014 (Hungary)
Genres:Fantasy film, Science Fiction, Thriller, Mystery, Action Film
ဇာတ်လမ်းအကြောင်းမပြောသေးခင်သရုပ်ဆောင်တွေ အကြောင်း နည်းနည်းတို့ရရင်…
၁) Ethan Hawke ကို ဘယ်ကားမှ မှတ်မှတ်သားသား အမူအယာရော ရုပ်ရော မကြိုက်တာမို့ ဒီ ကားမှာ စိတ်လျှော့ပြီးကြည့်တာပါ။
၂) SarahSnook ကို မင်းသမီး အနေနဲ့ ဘယ်ကားမှ မကြည့်ဖူးဘူးထင်တာပါပဲ။စမြင်မြင်ချင်း (ဇာတ်ဆောင်အရ) ဒီ မင်းသား တော်တော်ချောတယ်လို့ စိတ်ထဲမှတ်တာ။
မိန်းကလေးလိုလေးလည်းလှတာပဲ။ ဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့ Ethan Hawke ထက်ကိုအမူအရာပိုကောင်းတာ သိသာသလိုပါပဲ။
ကိုယ်တိုင်ကြည့်ဖြစ်ဖို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။ ပြောပြလို့ အရသာမရှိတဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးပါ။
နားထောင်ရုံနဲ့လည်းလိုရင်းမရောက်၊ သူတို့ ပေးချင်တဲ့ မက်ဆေ့(ချ) ကို မရပဲ ရှုပ်လိုက်တာကွာဆိုတဲ့ မှတ်ချက်ပဲရမှာပါ။
ဒါပေမဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရိုက်ကူးသွားတဲ့ ဇာတ်ကွက်လေးတွေ နဲ့ နည်းနည်း အေးတယ် ထင်ရပေမဲ့ စိတ်ဝင်တစား ဆက်ကြည့်ဖြစ်မဲ့ဇာတ်ကားပါ။
TimeMachine ကိုင်ထားတဲ့ အထူးအေးဂျင့် တစ်ယောက်ရဲ့မွေးခါမှသည် နောက်ဆုံး အချိန်ထိ ကြုံတွေ့ဖြတ်ကျော်ရတဲ့ ဘဝကို အဲဒီ အေးဂျင့်ကိုယ်တိုင်ကသူ့ကိုယ်သူ ပြန်လည် ရှင်းလင်း ရ တဲ့ ဇာတ်ကြောင်းပါ။
ဇာတ်လမ်းကိုသာ နားလည်မှာ ဖြစ်ပြီးးး တစ်ချို့အကြောင်းအရာတွေကတော့ တရားတော်နဲ့ စစ်တဲ့ အချိန်မှာ ဒွိဟဖြစ်နေဦးမှာပါ။
ဟောလီးဝုဒ်ကTime Machine နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတိုင်းမှာသတိထားမိတာ တစ်ခုက…
၁) သူတို့က “အတိတ်” ဆိုတာကို ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ရှိသလို ဖြစ်ပြီး ပျက်သွားတာလို မယူပဲ အတိတ်ရဲ့ ပုံရိပ်တွေဟာအချိန်တစ်ခု အနေနဲ့ ကျန်ခဲ့တယ်လို့ ယူဆတာပါပဲ။
၂) အဲဒါကြောင့်သူတို့က “အတိတ်”ဆိုတဲ့ ကာလ အပိုင်းအခြားကို အမြဲ ပြန်သွားနိုင်တယ်လို့ ယူဆတဲ့ အတွက်အခု လက်ရှိလူရဲ့ ပုံရိပ်အတိုင်းကပဲ ကုန်လွန်သွားခဲ့တဲ့ အတိတ်က အချိန်/နေရာ/အခြေအနေကိုဘေးကနေ ကြည့်သလို ပြန်သွားလို့ ရသလို အမြဲရိုက်ကူးလေ့ရှိပါတယ်။
၃) ဒီ ဇာတ်ကားကိုဒီ (၁) နဲ့ (၂) သော့ချက်နဲ့ ကြည့်မှသာ စကြည့်ကတည်းကဇာတ်ကွက်တိုင်းကို ဖမ်းမိမှာပါ။
ထင်ရာ အာရိုက်ပြီးပြီ ဆိုတော့ မြင်ရာကို လျှောက်ပြောတော့မဲ့ အပိုင်းပါ။
၁) ကြည့်ရင်းကျနော်တို့ ဘာသာမှာရှိတဲ့ သံသရာနဲ့ ရှေ့ဘဝ/နောက်ဘဝ စတဲ့ အပိုင်းတွေ (အဲ။ ပြီးတော့ ဇာတ်တော်ထဲကမောင်ပစ္စက အကြောင်းတွေပါ) ခေါင်းထဲဝင်လာပါတယ်။
၂) ရှေ့ကိုနည်းနည်းလေးပဲ ကြိုမြင်နိုင်မယ်ဆိုရင်တောင် ကျနော်တို့ ရဲ့ အခု လက်ရှိ ကံကြမ္မာကို နည်းနည်းထိန်းချုပ်လို့ရပါတယ်။ Time Machine နဲ့ မသွားနိုင်တာမို့ ညာဏ်မျက်စိလေးနဲ့ပဲကြည့်မြင်ရတော့မှာပေါ့လေ။
၃) အတိတ်/ရှေ့ဘဝမှာ အစပျိုးခဲ့သမျှ ဒီ ဘဝမှာ ရိတ်သိမ်းရမှာတို့၊ ဒီ ဘဝမှ ထင်ရာစိုင်းခဲ့ရင် နောက်ဘဝတစ်ခုမှာ အဲဒီ အကျိုးဆက်တစ်ခု ပြန်ခံရမှာတို့၊ သံသရာ ဆိုတာ စက်ဝိုင်းလိုပဲ အဆုံးမရှိလည်နေတာတို့ ဆိုတဲ့ သဘောတရားတွေဘာသာမတူတဲ့ ဒီ ရုပ်ရှင်ကားမှာ “သဘောထား သက်သက်” အဖြစ်လည်း တွေ့နိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။
၄) ချုပ်ပြောရရင်တော့ရုပ်ရှင်သီးသန့်အနေနဲ့ဆို နည်းနည်း ပျင်းစရာကောင်းပြီး ဖြတ်သွားဖြတ်လာ ကြည့်ဖို့ လုံးဝအားမပေးပါဘူး။
၅) မကြည့်ဘူးဆိုရင်လုံးဝမကြည့်ပဲ… ကြည့်မယ် ဆိုရင် “ဒါဖတ်ပြီးမှ ဒီရုပ်ရှင်ကြည့်ကြပါ” လို့ အော်ချင်ပါတယ်ခင်ညားးးး
ဟဲ ဟဲ စတာ
မကြည့်ဘူးဆိုရင်လုံးဝမကြည့်ပဲ… ကြည့်မယ် ဆိုရင် “ဒါဖတ်ပြီးမှ ဒီရုပ်ရှင်ကြည့်ကြပါ” လို့ အော်ချင်ပါတယ်
နာ့ အကိုဂျီးး လန့်တွားးဘီ..!
ကြည့်စရာ မလိုလောက်အောင်ကို ညွှန်းထားတာလားဟင်…
အခုတလော …သရဲကားတွေဘက် လှည့်နေလို့…
ဆရာမ၀ါဝါ၀င်းရွှေ အသေးစားညွှန်းမှပဲ.. အဲ့ကား ပိတ်ရက်ကြည့်အူးမယ်ဗျာ..
ကိုယ်တွေက The Fox lover တို့လို သိုင်းကားတွေပဲ ကြည့်တာများတယ်..
အဲ့ကားးကြီးး ကြည့်ပြီးး အိပ်ပျော်သွားးလို့ ဟိုနေ့က..!!
Painted Skin ကြည့် အူးးးစည်…
Cindrella အရင်ကြည့်မယ်လို့ ဒီမှာ ရုံတင်နေပြီ
ထုံးစံအတိုင်း ၀ယ်ထားတာတွေ ကုန်မှ ပဲ နောက်တခေါက်ဆိုင်ထပ်သွားမယ်
စင်ဒရဲလားးကို လိုင်းးပေါ်ရောက်တဲ့ထိ စောင့်အူးးမှာာ
မြန်မာစာတန်းးထိုးး နဲ့ ကြည့်မာာာ
မင်းသား ကို ရော မင်းသမီး ကိုရော လုံးဝ မသိဘူး ဇီ ကလေး ရေ။
အခုနှစ်ပိုင်း ရုပ်ရှင် တွေ မကြည့်ဖြစ်တာ ကြာပေါ့။
Time Machine ကား တွေထဲ မှာတော့ Back to the future အတွဲ လိုက် ကို ဘယ်ကားမှ မမှီ သေးဘူး ထင်ရဲ့။
အဲဒီ ကားမှာလဲ ဒီလိုဘဲ အတိတ် ဆိုတာ ကို ပြန်ပြန် ဖျက်ပြီး အနာဂါတ် ကို လိုချင်တာ ပုံသွင်းတာ။
အနာဂါတ် မှာ ဖြစ်မှာ ကိုလဲ ကြိုသိ ရမှာမို့ Time Machine ခမျာ အတိတ် သွားလိုက် ၊အနာဂါတ် ရောက်လိုက် နဲ့ ခမျာ ခေါင်းအတော်စား မယ်။
လက်တွေ့မှာလဲ တကယ်တော့ အတိတ် ကို ပြန်ဖျက် နိုင်ပါတယ်။
ရုပ်ပိုင်းတော့ မဟုတ်၊ စိတ်ပိုင်း ပေါ့။
ရုပ်ပိုင်း ကတော့ ကောင်းကောင်း ဆိုးဆိုး ကံ အတိုင်းထား လိုက်ပေါ့။
စိတ်ပိုင်း ကိုတော့ ဘယ်သူမှ ဘာက မှ ကိုယ့် ကို ချုပ် လို့ မရ ဘူးလေ။
ဒီတော့ ကိုယ့် အပိုင် ပေါ့။
အခု လဲ တို့များ ရဲ့ ရွှေတော် မျိုးတော် ကြောင်ကြောင် ကို ကြည့်လေ။
ခမျာ ဘယ်လောက် သနားဖို့ ကောင်းလဲ။
အတိတ် က အကြောင်း တွေ ကို လက်ရှိ ထဲ ဆွဲဆွဲ သယ်လာပြီး အမုန်းတရား အာဃာတ တွေ နဲ့။
ဟိုဘက် က တစ်ချို့ လဲ ဒီ လိုဘဲ။
ကျောင်းသား ဆို ကြောက်စိတ် အာဃာတ က လွှမ်းနေဆဲ မို့ လုပ်သင့် မလုပ်သင့် မမြင်နိုင်တော့ ။
အတိတ် ကို လက်ရှိ ထဲ ဆွဲ ယူပြီး အမုန်းစစ်ပွဲ ခင်း နေကြဆဲ။
ပြောရင်း ဟိုအရေး ဒီ အရေး ပါကုန် ပြန်ပေါ့။
BC ပေးးလိုက်ပါတယ် အရီးးရေ.
ဟိ ဟိ။ Thanks. :))
အဲဒီ လင့်(ခ) က မြန်မာ စာတန်းးထိုးး ဇာတ်ကားးတွေချည်းးပဲ…
တစ်ချို့ စကားးလုံးး အသုံးးတွေကလွဲရင် ကျန်တာ အိုကေပါတယ်..
ဟမ်​မ​ရေး အင်​တာနက်​က မကျိနိုင်​ပါပု ။ အခု ရွာထဲ စဉ်​ဆက်​မပြတ်​၀င်​နိုင်​​ရုံ​လေး​တောင်​ လက်​ဖက်​ရည်​ဖိုးထဲက လက်​ဖက်​ရည်​မ​သောက်​ပဲ ထည့်​​နေရတာပါ​ညှော်​ ။ သူဂျီးဆီက ပိုက်​ပိုက်​ထုပ်​ပြီးမှ Disc ၀ယ်​ကျိမှာ
ပြုံး၍လည်း ရွှီးတာကို နားထောင်တော်မူပါတယ်။
ရီ၍လည်း ရွှီးတာကို ဖတ်ပေးတော်မူပြီးသကာလ….
ရုပ်ရှင် ဝါသနာအိုးတွေ အတွက် ရေးတာပါ ချစ်မရယ်။
အခွေဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်း ဒီလိုပဲ ညွှန်းတာကြည့်မိတော့ ဆုံးဖြတ်လို့ရတာပေါ့
ကြည့် ဖြစ်အောင်ကြည့် ဖို့ ညွှန်းးတာမျိုးး မဟုတ်ပေမယ့်
ကိုယ့် အကြိုက်နဲ့ ကိုက်မကိုက်
ကြည့်ရမလားးး မကြည့်ရဘူးးလားး စဉ်းးစားးနိုင်အောင် ရွှီးးးထားးတာ…
. ကြည့်မယ် ဆိုရင် “ဒါဖတ်ပြီးမှ ဒီရုပ်ရှင်ကြည့်ကြပါ” ..လို့ပေါထား..အဲလေ.ပြောထားတော့
The Theory Of Everything လေးကိုရော
အညွှန်းလေး ရေးမပေးချင်ဘူးလား ဟင်
ကြည့် / မကြည့် ဘယ်ဟာပိုများးလဲလို့..
The theory of everything ကို ညွှန်းးရရင်
တညားး က ညွှန်းးတာ ဟုတ်ဘူးးလေ.
ဟိုရက်က ကြည့်တဲ့ Special Force ကားလေး မိုက်တယ်။
နောက်တစ်ကား ညွှန်းဖို့ အချိန်ကျနေပြီ ဆိုတာလေး
နောက်တစ်ကားက ကြည့်ထားတာ များပြီး ဘယ်ဟာညွှန်းရမှန်းမသိလို့။
ဟိုနေ့က မမဂျီးရဲ့ ဖဘက ဇာတ်လမ်းနာမည်ရေးပေးထားတာတွေကို စခွင်ရှော့ပြီး သကာလ အခွေဆိုင်မှာ ရသလောက် ဝယ်ထားတယ်… ဒီကားလည်း ရှာကြည့်ပြီး ဝယ်ကြည့်မယ်လို့စ်..
အဟိ.. ဒီပို့စ်ကို တွေ့တာကြာပြီ.. Predestination ဆိုတာ Final Destination အဆက်ထင်လို့.. ဝင်မဖတ်တာ… အဲ့ကားတွေကို ကြောက်လို့ မကြည့်ဘူး.. ခုမှ အားတင်းပြီး ဝင်ဖတ်တာ.. ဟိဟိ
ခု နောက် တစ်ကား တင်ပြီးပြီလို့(စ)